Mako 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 1:1-45
Johani Mubhabhatidzi anoparidza (1-8)
Kubhabhatidzwa kwaJesu (9-11)
Jesu anoedzwa naSatani (12, 13)
Kudanwa kwevadzidzi vekutanga (16-20)
Mweya usina kuchena unodzingwa (21-28)
Jesu anoporesa vanhu vakawanda muKapenaume (29-34)
Anonyengetera ari kwake ega (35-39)
Munhu ane maperembudzi anoporeswa (40-45)
1 Kutanga kwemashoko akanaka pamusoro paJesu Kristu, Mwanakomana waMwari: 2 Sekunyorwa kwazvakaitwa nemuprofita Isaya, kuti: “(Inzwa! Ndiri kutuma nhume yangu pamberi pako, ichafanogadzira nzira yako.)+ 3 Inzwi reari kushevedzera murenje riri kuti: ‘Gadzirai nzira yaJehovha!* Itai kuti migwagwa yake iti twasu.’”+ 4 Johani Mubhabhatidzi aiva murenje,* achiparidza rubhabhatidzo rwekuratidza kupfidza kuti zvivi zvikanganwirwe.+ 5 Uye vanhu vemunharaunda yese yeJudhiya nevagari vese vemuJerusarema vaienda kwaari, achivabhabhatidza* muRwizi rwaJodhani, vachireurura zvivi zvavo pamberi pevanhu vese.+ 6 Johani aipfeka chipfeko chemvere dzengamera uye aisunga bhandi reganda muchiuno,+ uye aidya mhashu neuchi hwemusango.+ 7 Uye aiparidza achiti: “Kune munhu akasimba kundipfuura achauya pashure pangu, ane shangu dzandisina kukodzera kukotama kuti ndisunungure.+ 8 Ndakakubhabhatidzai nemvura, asi iye achakubhabhatidzai nemweya mutsvene.”+ 9 Mumazuva iwayo Jesu akabva kuNazareta yeGarireya, akabhabhatidzwa muJodhani naJohani.+ 10 Achangobva kubuda mumvura, akaona denga richivhurika uye mweya uchidzika paari wakaita senjiva.+ 11 Uye inzwi rakabva kudenga richiti: “Ndiwe Mwanakomana wangu, anodiwa; ndakufarira.”+ 12 Uye mweya wakabva wamuendesa kurenje pakarepo. 13 Saka akagara murenje kwemazuva 40, achiedzwa naSatani.+ Aiva nezvikara zvemusango, asi ngirozi dzaimushumira.+ 14 Kuzoti pakasungwa Johani, Jesu akapinda muGarireya,+ achiparidza mashoko akanaka aMwari+ 15 achiti: “Nguva yakwana, uye Umambo hwaMwari hwaswedera pedyo. Pfidzai zvivi zvenyu,+ mutende mashoko akanaka.” 16 Paakanga achifamba achitevedza Gungwa reGarireya, akaona Simoni nemunin’ina wake Andreya+ vachikanda mambure avo mugungwa,+ nekuti vaiva vabati vehove.+ 17 Saka Jesu akati kwavari: “Nditeverei, uye ndichakuitai vabati vevanhu.”+ 18 Vakabva vangosiya mambure avo, vakamutevera.+ 19 Ati fambei zvishoma, akaona Jakobho mwanakomana waZebhedhi nemunin’ina wake Johani, vari muchikepe chavo vachigadzira mambure avo,+ 20 akabva avashevedza pakarepo. Saka vakasiya baba vavo Zebhedhi vari muchikepe vaine vashandi vavo, vakamutevera. 21 Uye vakapinda muKapenaume. Sabata parakangotanga, akapinda musinagogi, akatanga kudzidzisa.+ 22 Uye vakashamiswa nemadzidzisiro ake, nekuti aivadzidzisa semunhu ane chiremera, kwete sevanyori.+ 23 Panguva iyoyo chaiyo musinagogi ravo maiva nemumwe murume akanga akagarwa nemweya usina kuchena, uye akashevedzera kuti: 24 “Munei nesu, imi Jesu wekuNazareta?+ Mauya kuzotiparadza here? Ndinonyatsoziva kuti ndimi ani, Mutsvene waMwari!”+ 25 Asi Jesu akautuka, achiti: “Nyarara, ubude maari!” 26 Uye mweya usina kuchena wakaita kuti murume wacho agwinhe-gwinhe, uchishevedzera nenzwi riri pamusoro, ukabva wabuda maari. 27 Vanhu vese vakashamiswa nazvo zvekuti vakatanga kutaura vachiti: “Chii ichi? Dzidziso itsva! Anorayira nesimba kunyange mweya isina kuchena, ichimuteerera.” 28 Saka mashoko pamusoro pake akapararira nekukurumidza munharaunda yese yeGarireya. 29 Zvadaro, vakabva pasinagogi, vakaenda kumba kwaSimoni naAndreya vaina Jakobho naJohani.+ 30 Amai vemudzimai waSimoni+ vakanga vakarara vachirwara nefivha, uye akabva angoudzwa nezvavo. 31 Akaenda kwavari akavabata ruoko, ndokuvasimudza. Fivha yacho yakabva yapera, ivo vakatanga kuvagadzirira zvekudya. 32 Ava manheru, zuva parakanga ravira, vanhu vakatanga kuuya kwaari nevaya vakanga vachirwara uye vaiva nemadhimoni;+ 33 uye guta rese rakanga rakaungana pasuo chaipo. 34 Saka akarapa vazhinji vakanga vachirwara nezvirwere zvakasiyana-siyana,+ uye akadzinga madhimoni mazhinji, asi aisabvumira madhimoni acho kuti ataure, nekuti aimuziva kuti ndiKristu.* 35 Mangwanani-ngwanani, kunze kuchakasviba, akamuka, akabuda panze, akaenda kwake ega, akatanga kunyengetera.+ 36 Asi Simoni nevaya vaaiva navo vakatanga kumutsvaga 37 uye vakamuwana vakati kwaari: “Munhu wese ari kukutsvagai.” 38 Asi akati kwavari: “Ngatiendei kune dzimwe nzvimbo, mumaguta ari pedyo, kuti ndiparidzewo ikoko, nekuti izvi ndizvo zvandakauyira.”+ 39 Uye akaenda achiparidza mumasinagogi avo muGarireya yese achidzinga madhimoni.+ 40 Mumwe murume aiva nemaperembudzi akauyawo kwaari, achimuteterera akapfugama, achiti kwaari: “Kana muchida henyu, munogona kundichenesa.”+ 41 Akasiririswa nazvo, akatambanudza ruoko rwake, akamubata, akati kwaari: “Ndinoda! Cheneswa.”+ 42 Maperembudzi acho akabva angonyangarika, uye murume wacho akabva ava akachena. 43 Akamuendesa pashure pekumuudza zvakasimba 44 kuti: “Usatomboudza mumwe munhu nezvazvo, asi enda unozviratidza kumupristi, upe zvinhu zvakarayirwa naMozisi kuti ucheneswe,+ kuti zvive uchapupu kwavari.”+ 45 Asi aenda, murume wacho akatanga kuzivisa vanhu uye kuparadzira nyaya yacho kwese kwese, zvekuti Jesu akanga asingachakwanisi kupinda muguta asingaonekwi nevanhu, zvekuti akaramba ari kunze, kunzvimbo dzisina vanhu vakawanda. Asi vanhu vakaramba vachiuya kwaari vachibva kwese kwese.+
^ Pano shoko iri riri kureva nzvimbo isingagari vanhu vakawanda.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “aiziva kuti iye ndiani.”